CA Driver License Knowledge Test Preparation Class #2 (Day-2) | One Myanmar Community
Home » CA Driver License Knowledge Test Preparation Class #2 (Day-2)
CA Driver License Knowledge Test Preparation Class #2 (Day-2)
Myanmar Community and Cultural Center, 33511 Western Avenue, Union City, CA 94587
ကယျလီဖိုးနီးယား ပွညျနယျ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ပွငျဆငျမှုသငျတနျး အမှတျစဉျ (၂)
ကယျလီဖိုးနီးယား ပွညျနယျရဲ့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ လြှောကျထားရာတှငျ ပထမအဆငျ့ ဖွဆေိုရသော ရေးဖွစောမေးပှဲအတှကျ ပွငျဆငျရာမှာ အခကျအခဲ ရှိနသေူမြားအတှကျ လှယျကူစှာ ဖွဆေိုနိုငျဖို့ ကူညီပေးမယျ့ သငျတနျးတဈခုကို အောကျတိုဘာလ (၂၇) ရကျနမှေ့ာ စတငျသှားပါမယျ။ သငျတနျးသားဦးရေ (၁၅) ဦး သတျမှတျထားသညျ့အတှကျ တကျရောကျလိုသူမြား ကွိုတငျစာရငျး ပေးသှငျးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီသငျတနျးကတော့ မွနျမာကှနျမွူနီတီရဲ့ မိတျဆှအေားလုံးအတှကျ အခမဲ့ ဖှငျ့လှဈပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျတနျးခြိနျမြားကို အောကျမှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
သငျတနျးအခြိနျ ။ ။ အပတျစဉျ တနင်ျဂနှနေတေို့ငျး နံနကျ (၁၀) နာရီ မှ နလေ့ညျ (၁၂) နာရီထိ။
သငျတနျးကာလ ။ ။ အောကျတိုဘာလ (၂၇) ရကျ မှ ဒီဇငျဘာလ (၂၉) ရကျထိ၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈ။
(မှတျခကျြ ။ ။ နိုဝငျဘာလ (၁၀) ရကျနေ့ တဈရကျပိတျပါသညျ။)
သငျတနျးနရော ။ ။ One Myanmar Community
မွနျမာကှနျမွူနီတီ နှငျ့ ယဉျကြေးမှုစငျတာ
33511 Western Avenue
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပြင်ဆင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ရဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပထမအဆင့် ဖြေဆိုရသော ရေးဖြေစာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရာမှာ အခက်အခဲ ရှိနေသူများအတွက် လွယ်ကူစွာ ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ ကူညီပေးမယ့် သင်တန်းတစ်ခုကို အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ စတင်သွားပါမယ်။ သင်တန်းသားဦးရေ (၁၅) ဦး သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် တက်ရောက်လိုသူများ ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကတော့ မြန်မာကွန်မြူနီတီရဲ့ မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက် အခမဲ့ ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းချိန်များကို အောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းအချိန် ။ ။ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နံနက် (၁၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂) နာရီထိ။
သင်တန်းကာလ ။ ။ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက် မှ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်ထိ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
(မှတ်ချက် ။ ။ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ တစ်ရက်ပိတ်ပါသည်။)
သင်တန်းနေရာ ။ ။ One Myanmar Community
မြန်မာကွန်မြူနီတီ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ
One Myanmar Community (OMC) is offering California Driver License Knowledge Test Preparation Class #2 starting on October 27, 2019. The class is limited for 15 students. Please sign up. This class is free for everyone.
Time: Every Sundays from 10:00 AM to 12:00 PM
Duration: October 27 to December 29, 2019
(Note: Close on November 10, 2019)
Location: One Myanmar Community
Myanmar Community and Cultural Center